Ucingo: +86 577 6266 0666
Ifeksi: +86 577-62720288
TXGN6-12 Inflatable inkinobho iKhabhinethi
Supply Ikhono: TENPRO
imikhiqizo ekuvikeleni Okuhlezi emqondweni
Inflatable inkinobho iKhabhinethi
Inkinobho iKhabhinethi kuyinto Modular iyunithi mode, okuyinto zingahlanganiswa ngokuvumelana ukusetshenziswa ezahlukene, futhi yakhiwa amayunithi fixed kanye amayunithi Olwandisekayo ukuze kuhlangatshezwane nesidingo ukusetshenziswa nezimo icwecwe inkinobho iKhabhinethi in ezincane ezihlukahlukene.
TXGN6-12 inflatable inkinobho iKhabhinethi uhlelo evaliwe ngokuphelele. Zonke izingxenye zayo bukhoma futhi ukushintsha eziNgenamazwi mahala kule engagqwali igobolondo, wonke inkinobho divayisi izimo imvelo yangaphandle, ngakho-ke ungakwazi ukuqinisekisa nokwethenjelwa ukusebenza kanye nokuphepha siqu, futhi uqaphele isici ukunakekelwa kakhulu. Ngokukhetha busbar Olwandisekayo, iyiphi inhlanganisela ingafinyelela modularization egcwele. Enwetshiwe busbar ukuphepha ukwahlukanisa kanye ukuzivikela ukuze kuqinisekiswe ukuthembeka nokuphepha high. TXGN6-12 uhlobo inkinobho inflatable iKhabhinethi zingakhiqiza isixazululo TV ezishintshayo, yakha umqondo wegama elithi inkinobho ohlakaniphile, noma ukunciphisa umsebenzi yokumiswa ensimini futhi kungasebenzi.
TXGN6-12 uhlobo inkinobho inflatable iKhabhinethi akunakudluliswa Olwandisekayo ejwayelekile ukumiswa kanye Olwandisekayo ejwayelekile ukumiswa. Ngenxa yale nhlanganisela yamakhono module okugcwele module nengxenye futhi expansibility ayo, it has Ukuzivumelanisa nezimo ezikhethekile kakhulu.
TXGN6-12 uhlobo inkinobho inflatable nokobana GB ejwayelekile.
Impilo design ngaphansi kwezimo zasendlini (20 ℃) ​​idlula iminyaka engu-30.
imodeli yomkhiqizo kanye nencazelo
zamanje Kulinganiswe ngo
voltage Kulinganiswe ngo
uhlobo Inflatable inkinobho iKhabhinethi
Enterprise Ikhodi (TENPRO Power Technology)
TXGN6-12 uchungechunge iKhabhinethi inflatable SF6 igesi njengoba arc zokucisha futhi ukwahlukanisa ophansi.
Shintsha iKhabhinethi ivaliwe ngokugcwele, ngci ngokugcwele; busbar, shintsha futhi bukhoma izingxenye ngokuphepha ebiyelwe engagqwali igobolondo
Ikamelo ligcwele SF6 yegesi 1.4bar, futhi ebangeni Ukuvikelwa isesikhathini IP67 :. Lonke inkinobho kudivayisi nhlobo ethonyeni izimo zangaphandle kwemvelo. Ngisho ngaphansi kwezimo ezimbi ezifana namanzi transience ukucwiliswa, inkinobho kungenziwa eziqhutshwa evamile futhi umkhiqizo kungaba ukunakekelwa ukuphila.
Inkinobho iKhabhinethi has a idivayisi ephelele "ezinhlanu lokuvikela" kuncike, okungase aluqede ngokuphelele abasebenzi kanye nemishini ukungasebenzi kubangelwa amaphutha nje omuntu.
Zonke inkinobho amakhabethe babe okunokwethenjelwa ephephile iziteshi impumuzo ingcindezi, ngisho ezimweni ezibucayi ukuqinisekisa ukuphepha siqu opharetha.
Shintsha iKhabhinethi sehlukaniswe fixed iyunithi inhlanganisela futhi Olwandisekayo iyunithi inhlanganisela.
Shintsha amakhabethe kuvame fronted nangaphakathi komugqa, futhi ungakwazi futhi ifakwe ezindaweni ezahlukene ukufeza ohlangothini esidayisa noma uhlangothi ukunwetshwa
Usayizi iKhabhinethi esivumelana ukufaka futhi kungaba efanelekayo isikhala esincane kanye nezimo zemvelo abampofu.
Shintsha iKhabhinethi kungenziwa amisiwe kagesi, elawulwa kude futhi ukuthola amadivayisi ngokuvumelana nezidingo ezahlukene abasebenzisi.
C module umthwalo switch
F module kuhlanganiswe izinto zikagesi neze
Ukuba Wedwa / isisekelo switch
cleaner (wesifunda) full
imvamisa Kulinganiswe ngo
Amandla imvamisa ukumelana voltage (efanayo / ngobugebengu)
Umbani imvamisa ukumelana voltage
Kulinganiswe ngo-closed-loop kuphulwa zamanje
Kulinganiswe ngo ikhebula ukushaja breaking zamanje
Kulinganiswe ngo ekwenziweni isekhethi wamanje (isiqongo)
isiqongo Kulinganiswe ngo ukumelana zamanje
Kulinganiswe ngo okufutshane esigcwele ukumelana zamanje
Kulinganiswe ngo isekhethi kuphulwa zamanje
Kulinganiswe ngo ukudluliselwa wamanje
zamanje enkulu yama fuses
Previous: TXGN66-12 (Z) Fixed okuvalelwe kudivayisi usuke enamandla amakhulu kagesi kudivayisi usuke
Olandelayo: TXGNH-12 Ibhokisi-uhlobo fixed metal-okuvalelwe kudivayisi usuke enamandla amakhulu kagesi kudivayisi usuke
High Unit Voltage Ring Main
Mbumbulu Abb-Uhlobo Ring Main Unit
Mbumbulu Schneider-Uhlobo Ring Main Unit
Indoor Ring Main Unit Ukuba Wedwa Shintshela
TXGN2-12 (Z) Ibhokisi-uhlobo fixed AC sw metal-okuvalelwe ...
TZN28 (A) -12 uchungechunge Indoor high voltage cleaner c ...
TD uchungechunge Intelligent ukusatshalaliswa ezishintshayo s ...
TSC Insimbi steel nisishiye siboshwé ngebhande uthayi (iphaneli uhlobo)
TZW32F-12 ze-Outdoor ezihlakaniphile cleaner wesifunda br ...
TZN63 (TVBM7) -12 Side-agibele amahhashi zasendlini Volta okusezingeni eliphezulu ...